J@M - Episode4- An Interview - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on June 11, 2012 at 11:15 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
3. လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်း (An Interview)
Sanjeev တစ်ယောက် Jam ကို လူတွေ့ စစ်ဆေးခံဖို့ ရောက်လာပါပြီ။
"ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းပါ၊ Sanjeev။ ကျွန်မက Alison Lime ပါ။ ဒီ ကုမ္ပဏီရဲ့ Director ပါ။"
"ဟယ်လို။ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။"
''ကဲ။ ဘာကြောင့် Jam မှာ အလုပ်လာလုပ်ချင်တာလဲ ပြောပါဦး"။
"ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်လက်ရှိအလုပ်မှာပျော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက် တာဝန်ပိုများများယူရပြီး ရှေ့ဆက်ဖို့ အချိန်ရောက်နေပါပြီ။"
"ကျွန်တော် နယ်ပယ်အသစ်၊ အထူးသဖြင့် ဈေးကွက် ရှာဖွေမြှင့်တင်ရေး (Marketing) ပိုင်းမှာ ကျွန်တော့ အစွမ်းအစကို တိုးတက်ချင်ပါတယ်။"
"အလုပ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အတွ့အကြုံတွေရော ဘာရှိလဲ"။
"ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော် Philip Brown မှာအလုပ် လုပ်နေတာ အခု သုံးနှစ်ရှိပါပြီ။ အဲဒီတော့ လုပ်ငန်းဖောက်သည်များနဲ့ တိုက်ရိုက် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အတွေ့ အကြုံရှိပါတယ်။ လောလောဆယ်လဲ Marketing နဲ့ Diploma သင်တန်း တက်နေပါတယ်။"
"ကဲ။ လာတွေ့ပေးတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Sanjeev။ မနက်ဖန် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ့မယ်"။
အခုပြောသွားတဲ့ စကားတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။ Interview မှာ အမြဲ မေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်း (၂) ခု ကတော့
ဘာကြောင့် ဒီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တာလဲ။ (Why do you want to come and work for Jam?)
လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘာအတွေ့အကြုံရှိလဲ။ (What relevant experience have you got for this job?)
ဒီမေးခွန်းတွေကို ဘယ်လိုပြန်ဖြေရင်ကောင်းမလဲ။ Sanjeev ဖြေသွားတာကို ကြည့်နော်။
'ဘာကြောင့် ဒီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တာလဲ' ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို Sanjeev က လက်ရှိအလုပ်မှာလည်း အဆင်ပြေကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းအတွက် စဉ်းစားကြောင်း ပြောသွားပါတယ်။
Why do you want to come and work for Jam?
Well, I enjoy my current job. (အခုလက်ရှိ အနေအထားကို ပြောလို့ Simple Present Tense [Enjoy + Noun] ကို သုံးပါ)
… but it’s time for me to move on to something with more responsibility. (ရည်ရွယ်ချက်ပြောနေတာဆိုတော့ To + Verb infinitive [to move on ...] လို့ပြောတာပါ။)
I want to develop my skills in new areas – especially marketing. (ဒီမှာလဲ လက်ရှိဆန္ဒကို ပြောနေတာမို့လို့ Simple Present Tense want to+ Verb infinitive [want to develop my skills] နဲ့ပြောပါတယ်။)
'လုပ်ငန်းနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဘာအတွေ့အကြုံရှိလဲ' ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို Sanjeev က လက်ရှိအလုပ်ကို လုပ်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒါကြောင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိကြောင်း၊ လျှောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်း နဲ့ပက်သက်တဲ့ သင်တန်းတွေလဲတက်နေကြောင်းပြောသွားပါတယ်။’
What relevant experience have you got for this job?
Well, I’ve been working at Philip Brown for three years now. (အလုပ်လုပ်နေတာ ကာလတစ်ခု ကြာပြီဆိုတော့ Present Perfect Continuous "has/have+been + Ving" [have been working at Philip Brown for three years now] လို့ပြောတယ်။
So I havealot of experience of working directly with clients. (လက်ရှိအနေအထားဆိုတော့ Simple Present [So I havealot of ....] ပေါ့)
I’m currently studying foraDiploma in Marketing. (လောလောဆယ်လုပ်ဆဲလုပ်ငန်းကို Present Continuous am/is/are + Ving [I'm currently studying] လို့ ပြောတယ်နော်။)
ကဲ Sanjeev တစ်ယောက်အလုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားရအောင်။ ကိုယ်လဲ လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုလောက် စဉ်းစားကြည့်ပြီး၊ လူတွေ့ စစ်ဆေးခံရတယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်နော်။ Sanjeev ရဲ့ အဖြေတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ကိုယ်လဲ ဒီမေးခွန်းတွေကို ဘာပြန်ဖြေမလဲဆိုပြီး ရေးကြည့်ပါဦး။
ဘာကြောင့်ဒီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တာလဲ (Why do you want to come and work for this company?)
လုပ်ငန်းနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဘာအတွေ့အကြုံရှိလဲ (And what relevant experience have you got for this job?)
ပေါ့ပါးပျော်ရွှင်စွာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူနိုင်ပါစေ။
Permalink Reply by Htay Htay Aung on June 12, 2012 at 14:02
Permalink Reply by zawwinhtun on June 12, 2012 at 17:54
Permalink Reply by aungkyawsoe on June 13, 2012 at 19:54
Permalink Reply by Ummay Ayman on August 3, 2012 at 12:39
Hi Aung Kyaw Soe,
You don't need to download it. You can read it without downloading it.
Permalink Reply by 2sjss24qypy9u on June 15, 2012 at 13:21
Permalink Reply by Zaw Win on June 23, 2012 at 17:55
Thanksamillion of your goodwill.
Permalink Reply by 29a6k549qdbrt on June 24, 2012 at 20:27
It is very useful for me so much,Teacher.Thank You so much.
Permalink Reply by win win shwe on June 25, 2012 at 11:55
Permalink Reply by su sandy on July 18, 2012 at 20:27
It supports mealot. so thanks......
Permalink Reply by may phoo pyae on July 20, 2012 at 17:16
This is good sentences for interview. I like it.
Permalink Reply by htarsusukyawshein on July 26, 2012 at 10:54
Permalink Reply by 069x1cfj651oj on August 8, 2012 at 11:42